Johnson 10 HP soavalin-dranomasina Tune-Up Project | Outboard Boat Motor Repair
Johnson 10 HP soavalin-dranomasina Tune-Up Project
Afaka izao miditra amin'ny kaonty Facebook.
napetraky Matt ny Thu, 06 / 06 / 2019 - 20: 05
Marika famantarana ho an'ny mari-pamantarana amin'ny fametrahana ny banga sy ny tohotra
Misaotra anao naka ny fotoana hamoronana ny fomba fampianarana ho an'ny fikojakojana ny takelaka efa tranainy. Efa nanolo ny tohatra, ny bobongolo sy ny condensers aho ao amin'ny 1958 Johnson 10hp manaraka ny fomba fitsaboana anao. Raha mametraka ny raky aho amin'ny Top marika miaraka amin'ny teboka misokatra ho an'ny .20 ary avy eo dia mametaka ny tebiteby, mifanaraka amin'ny fanalahidy, ny marika eo amin'ny tadin-drano izay azoko atao mba hametraha ireo teboka dia tsy misy ny toerana eo akaikin'ireo marika roa eo amin'ny takelaka magneto. Naka ny takelaka magneto aho (nanolo ny tambatsela plug) ary naverina naverina indray, tsy maintsy averina indray ny takelaka amin'ny manaraka fomba fanao manokana? Sa mifanaraka amin'ny marika manokana?
napetraky ttravis ny Thu, 06 / 06 / 2019 - 23: 02
Namaly ny Marika famantarana ho an'ny mari-pamantarana amin'ny fametrahana ny banga sy ny tohotra by Matt
Heveriko fa tsy misy afa-tsy fomba iray hametrahana ny takelaka magneto. Tsy misy fanitsiana.
Misy fanoratana roa nataoko ho an'ny rafi-pampana. Nataoko iray ho an'ny 3.0 Evinrude ary iray hafa ho an'ny 5.5 Johnson. Nanoratra azy ireo aho tamin'ny fotoana samihafa, ary mifameno izy ireo, noho izany dia manoro hevitra anao aho hamaky azy roa. Samy manana rafitra fiarovan-tena avokoa ireo sy ireo fitaovanao. Heveriko fa manao asa tsara kokoa ny 5.5 amin'ny fanazavana ny hevitrao. Eto aho dia manazava fa mety tsy maintsy manitsy ny elanelam-pifamoivoizana ianao mba hahatonga izany eo afovoany eo amin'ny marika toy ny teboka misokatra. Raha tsy manana marika eo amin'ny volondriakanao ianao amin'ny 2nd cylinder, dia mety ho voatery hanamboatra ny anao manokana amin'ny faran-drivotra na ny 180 degrees. Marika tokana ihany no hita eo amin'ny fotony.
Manantena aho fa tsy nampifangaro anao aho. Raha mbola mila fanampiana ianao dia afaka manondro anao amin'ny manam-pahaizana manokana kokoa noho izaho aho.
napetraky Matt tamin'ny Fri, 06 / 07 / 2019 - 19: 34
Misaotra ny valiny. Niahiahy aho fa misy toerana iray ihany ho an'ny takelaka fiarovana, noho ny fifamatorana amin'ny tavoahangy. Ao amin'ny ohatra roa (3.0 sy 5.5), dia milaza ianao hoe "Rehefa manamarika ny fotoana misy ny tebiteby dia eo anelanelan'ny marika roa eo amin'ny takelaka fiaramanidina, tokony manokatra ny hevitra ary ny ohm metatra dia hiova amin'ny 0 amin'ny ohm tsy misy." Rehefa tonga eo amin'io toerana io ny marika famantaranandro dia mamaky zero ilay metatra. Raha esoriko ny tebiteby (sobika), ny kirarok'ireo teboka eo amin'ny cam dia tsy lavitra ny toerana avo, marika "Top". Raha manodina ny tavoahangy aho mba handefa ilay takelaka fiara, azoko atao ny manakaiky ny Top, fa tsy amin'ny Top.
Mahatsiaro ho toy ny manao fahadisoana tena lehibe aho eo amin'ny dingam-pitsaboana, satria toa toa tokony ho maika hiverina izy.
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 06 / 08 / 2019 - 11: 10
Namaly ny Misaotra ny valiny. I ... by Matt
Azonao antoka ve fa manana ny ...
Azonao antoka fa manana ny teboka mety ho an'io motora io ianao? Manontany tena fotsiny.
2 herinandro 3 andro lasa izay